China LVL Formwork Beam orinasa sy mpanamboatra |Changyu
Manana fanontaniana?TEL:+86 15262133000
Fizotry ny famokarana plywood
Panel anatiny fiara
Plywood ho an'ny Campervans sy Caravans
Plywood haingon-trano tsara tarehy sy takelaka
Plywood UV Lacquered
Sarimihetsika Faced Plywood
Plywood Birch feno
Birch 12MM manerana ny plywood
Full Pine LVL ampiasaina amin'ny Cons...
Plywood ho an'ny kalitao avo lenta...
Loading Quantity: 20'GP-8pallets/22CBM, 40'HQ-18pallets/50CBM
Fepetra fandoavam-bola: T / T na L / C
Delivery Time: Ao anatin'ny 20 andro aorian'ny fametrahana fanamafisana
Fanamarinana: CE, FSC, EUTR, CARB, EPA, JAS, ISO
Fitaovana: Radiata Pine, Russia Larch
Hateviny: 45/65/75/90mm / custom
Famoahana formaldehyde: E0≤0.5mg/L, E1≤1.5mg/L, E2≤5.0mg/L
Hazo kesika feno LVL, LVL framing, LVL rafters na strand hazo/hazo inengineered/hoy hazo namboarina ho an'ny LVL molding Structural LVL
HW structural laminated veneer lumber (LVL) izay namboarina mifanaraka amin'ny AS / NZS 4357 miaraka amin'ny fananana voafaritra mifanaraka amin'ny AS / NZS 4063.2 ary noho izany dia manaraka ny fepetra takiana amin'ny famolavolana rafitra mifanaraka amin'ny AS1720.1
HW LVL terminator dia misy amin'ny habe rehetra ary anisan'ny Carter Holt Harvey Terminator.HW H2-S Terminator dia tsaboina amin'ny termite any atsimon'ny Tropikan'i Capricorn.Ny fitsaboana dia ampiharina amin'ny tsipika lakaoly mandritra ny fanamboarana mba hahazoana fiarovana feno amin'ny alàlan'ny andry.Tsy ilaina ny famehezana fanampiny amin'ny tendrony tapaka, lavaka na takolaka.Ny haavon'ny fitsaboana hafa dia azo avy amin'ny mpamatsy amin'ny fangatahana, fa ny fitsaboana dia voafetra amin'ny fampiasana ambonin'ny tany.Tsy azo tsaboina mora foana ny hySPAN amin'ny fampiharana mifandray amin'ny tany.
HW LVL dia amboarina amin'ny alàlan'ny fatorana 'A' miaraka amin'ny famoahana Formaldehyde latsaky ny 0.5mg/l (mitovy amin'ny E0) avy amin'ny vokatra farany.
laminated veneer karazana hazo rafitra lvl
Ho an'ny fanomezan-toky ny kalitao dia amboarina miaraka amin'ny fizotran'ny fanaraha-maso tsy miankina sy ny fanamarinana ny vokatra.Carter Holt Harvey dia miantoka fa ny hazony dia azo avy amin'ny ala tantanana ary manolotra FSC 'Chain of Custody' voamarina amin'ny fangatahana.
Ny HW LVL dia novokarina tamin'ny endrika endrika ara-drafitra ary tsy ampiasaina amin'ny endriny ivelany ary amin'ny fotoana fandefasana avy amin'ny toerana famokarana dia misy hamandoana eo anelanelan'ny 8-15%.
Ny rairainy LVL formwork dia voaloko amin'ny loko ho fiarovana ny hamandoana sy ny famantarana vonona.Ny HW dia manana sisiny misy chamfered mba hanamora ny fikarakarana sy ny fandotoana ny rano.Ny HW dia maneho fanatsarana lehibe amin'ny taratra hazo mahazatra ary mora kokoa ny mampiasa, azo ampiasaina kokoa noho ny fitaovana hafa.Izy io dia matanjaka, maharitra, azo itokisana ary azo ampiasaina indray.
Manana haben'ny fizarana roa mahazatra izahay 95mmx65mm sy 130mmx65mm (halalin'ny x hateviny).Ny halavan'ny andry LVL formwork dia azo atao mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa hatramin'ny 6 metatra.
Ny tombony amin'ny HW structural LVL
Ny logs kely dia azo atao ho vokatra LVL lehibe.
Ny halavan'ny LVL dia misy hatramin'ny 12m
Ny loharanon-kazo dia azo amboarina amin'ny alàlan'ny fanasokajiana sy fifantenana veneer ho an'ny faritra samihafa amin'ny fizarana LVL ary fanaovana vokatra isan-karazany manana toetra samihafa.
Ny fananana ara-drafitra an'ny LVL dia tena mitovitovy satria ny soson'ny veneer manify efa voafantina mialoha ho an'ny stiffness (coefficient of variation for modulus of elasticité latsaky ny 5%).
Ny mpikambana LVL dia manana tanjaka ambony noho ny fiovaovan'ny ambany sy ny toetran'ny hazo tsy fahita firy amin'ny sosona manify.
Ny LVL dia azo tapahina sy amboarina amin'ny fitaovana fanamboaran-kazo mahazatra.
Ny LVL dia matetika ampiasaina amin'ny famenoana ny fampiasana hazo tsofa amin'ny fananganana trano.
Fampiharana ny HW structural LVL
LVL dia mifanentana indrindra amin'ireto fampiharana manaraka ireto
Rafters sy joists
Lintels, rairainy ary mpikambana framing
Ny takelaka LVL dia tapaka ho mpikambana ara-drafitra izay manana tanjaka sy henjana avo.
Ny LVL dia mety amin'ny fampiharana ara-drafitra toy ny andry, rafters ary andry amin'ny tranobe isan-karazany ao anatin'izany ny trano, ara-barotra, indostrialy ary rafitra ambanivohitra.Ny LVL manokana sasany dia manana veneers kely napetraka mitsangana (mihetsika cross).
Amin'ny rafitra ara-barotra na indostrialy dia matetika izy io no ampiasaina ho solon'ny hazo ho an'ny vy ara-drafitra na simenitra.
Fonosana sy Containerization
teo aloha: Sarimihetsika Birch Faced Plywood
Manaraka: 4 x 8 Baltika Birch plywood
HW Anti-Slip Film miatrika plywood
AS/NZS 4357 Rafitra LVL Timber
HW 8′ 10′ 12′ 16′ Kana...
Tonga soa eto amin'ny CONSULT
POSTS vao haingana
Jereo ny Birch Plywood
Room 6-135, Jushan Road, Donghu Street, Pizhou City, Jiangsu Province, Sina